डा. बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : श्रीमान खिरारेको आदेश किन नपढेको ? « Lokpath
२०७७, १४ पुष मंगलवार १०:०२
डा. बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी : श्रीमान खिरारेको आदेश किन नपढेको ?
प्रकाशित मिति : २०७७, १४ पुष मंगलवार १०:०२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात रुपमा संसद विघटन गरेसँगै देशमा राजनीतिक अन्यौलता छाएको छ । ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले समयअगावै संविधान विपरित संसद विघटन गर्नुलाई सत्तारुढ पार्टी र प्रतिपक्ष साथै सर्वसाधारणले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
कतिपय विश्लेषकहरुले यसलाई यसअघि भएका राजनीतिक कू को संज्ञा दिएका छन् । त्यस्तै संविधानविद्हरुले ओलीको असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मत जाहेर गरिरहेका छन् ।
यसैक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले संसद विघटनको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । विस २०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको पालामा भएको संसद विघटनको कुरालाई अहिलेको विघटनसँग जोडेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । २०६९ जेठ १४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधान सभाको म्याद नथपेका कारण संसद भंग भएको थियो । त्यसबेला हालका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग भएपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुने र चुनावमा लागेपछि संविधान र बजेटमा नभएका कुरा लागू गर्न नसक्ने बताएका थिए ।
यसै प्रशंगमा ट्वीट गर्दै डा भट्टराई लेख्छन्, “फेरि बाबुरामले पनि संविधानसभा बिघटन गर्याथ्यो रे ! हैन केही मान्छेले भ्रमको खेति गरेरै पेट पाल्ने कसम खाएका हुन् कि कुरै नबुझ्ने हुन्न ? नत्र किन तथ्यको छानवीन नगरेको वा अस्ति मात्र यही ठाउॅमा पोस्टिएको श्रीमान खिरारेको आदेश किन नपढेको रु अब त पढ र खण्डन गर !”
फेरि बाबुरामले पनि संविधानसभा बिघटन गर्याथ्यो रे! हैन केही मान्छेले भ्रमको खेति गरेरै पेट पाल्ने कसम खाएका हुन् कि कुरै नबुझ्ने हुन्?नत्र किन तथ्यको छानवीन नगरेको वा अस्ति मात्र यही ठाउॅमा पोस्टिएको श्रीमान खिरारेको आदेश किन नपढेको? अब त पढ र खण्डन गर! https://t.co/QiXgU3x35f pic.twitter.com/tfG8dKKCtM
— Baburam Bhattarai (@brb1954) December 29, 2020